Helen_Jackson | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဟယ်လင်ဂျက်ဆင်
I work asapart-time tour guide in Kent and blog about the experience. Her favorite weekend activity isawalking tour on the South West Coast of Bristol. She is alsoastrong advocate ofasustainable lifestyle and hopes to writeabook about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သမိုင်းဝင်အထင်ကရနေရာများနှင့်နေရောင်ကနေအထိကြီးအမြင်များရာပေါင်းများစွာလိုဏ်ဂူတောင်ပေါ်ကမ်းရိုးတန်းကိုနမ်းနဲ့အတူ, ဥရောပအမှန်တကယ်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာလမ်းခရီးစဉ်များအတွက်စုံလင်သောဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့သင့်ရဲ့လမ်းကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်…
5 ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင် Explore ရန်လျော့နည်းလူအစုအဝေးမြို့ကြီးများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပြင်သစ်က၎င်း၏လှပသောမြို့ကြီးများနှင့်ကျော်ကြားအထင်ကရအဆောက်အကျေးဇူးတင်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်. တိုင်းပြည်တစ်အိပ်မက်က၎င်း၏ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားလိုရာခရီးနှင့်အရသာအစားအစာဖြစ်ပါတယ်. များစွာသောခရီးသွားဧည့်ပဲရစ်မှစုပြုံနေချိန်တွင်, တမြို့လုံးမကြာခဏအလွန်ထူထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, အထူးသဖြင့်…